चालू आवमा ६९ ओटा पूर्वाधार निर्माणका योजना सम्पन्न | Artha News Nepal
Home	विकास	चालू आवमा ६९ ओटा पूर्वाधार निर्माणका योजना सम्पन्न
चालू आवमा ६९ ओटा पूर्वाधार निर्माणका योजना सम्पन्न
by रासस माघ ७, २०७७
काठमाडौं – काडमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा ६९ ओटा पूर्वाधार निर्माणका योजना सम्पन्न गरेको जानकारी दिएको छ ।
यस अवधिमा कामपाको अघिकार क्षेत्रभित्र पर्ने २३ किलोमिटर सडक कालेपत्र र ३४ हजार १६५ वर्गमिटर सडक मर्मत गरिएको छ । चार वडा भवन, दुई अन्य भवन र दुई आकाशे पुल निर्माण सम्पन्न गरिएको कामपाले जानकारी दिएको छ ।
त्यसैगरी तीन किलोमिटर सडक ढलान गरिएको छ । ९७२ मिटर ढल राख्ने र ८६० मिटर ब्लक छाप्ने काम सकिएको कामपाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले जानकारी दिए । कामपाभित्र करीब एक हजार ४५० किलोमिटर पक्की सडक छ ।
कामपाले आठ मिटरभन्दा कम चौडाइका सडक मात्र मर्मतसम्भार गर्छ । कामपाभित्र आठ मिटरभन्दा कम चौडाइका सडक ९५० किलोमिटर छ । कामपाभित्र ६२ मिटर चौडाइका सडकसमेत छन् ।
२०१ चालू अवस्थामा र १६५ गएको वर्षबाट दायित्व सरेर आएका गरी ३६६ मध्ये २२५ कार्यान्वयन चरणमा छन् भने ७२ ओटा शुरु हुन बाँकी रहेको कामपाले जानकारी दिएको छ । यता सामाजिक विकासतर्फ रू. एक अर्ब ६२ करोडको योजना छन् ।
सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कामपाले लिएका २३ नीतिका आधारमा विभागले आन्तरिक स्रोतबाट गर्ने गरी ७७, नेपाल सरकारबाट प्राप्त सःशर्त अनुदानबाट २४ र प्रधानमन्त्री रोगजार कार्यक्रमबाट आठ गरी १०९ कार्यक्रम तय गरेको छ । तीमध्ये ६६ कार्यक्रम शुरु गरिसकिएका र ३२ कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा छन् ।
त्यसैगरी, आयतर्फ अहिलेसम्म रू. तीन अर्ब १० करोड राजश्व संकलन भएको छ । गएको वर्ष यस अवधिमा रू. चार अर्ब २२ करोड संकलन भएको थियो ।
लक्ष्यका आधारमा गएको वर्षको पहिलो ६ महीनामा ३५ प्रतिशत राजस्व प्राप्त भएको थियो भने यस वर्ष २९ प्रतिशत प्राप्त भएको छ । संकलित रकममध्ये रू. एक अर्ब ७५ करोड अनलाइन प्रणालीबाट प्राप्त भएको हो । कामपाका मुख्य कर शीर्षकहरुमा सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, बहाल कर, मनोरञ्जन करलगायत छन् ।
कामपाले चालू आवमा रू. १४ अर्ब २६ करोड ६५ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । कामपा भौतिक पूर्वाधार विभागका लागि चालू आवको विनियोजित बजेट रू. तीन अर्ब एक करोड ६१ लाख छ हजार छ ।
निर्माणनिर्माण कार्यपूर्वाधार निर्माणयोजना
नयाँबसपार्क–कुलेश्वर करिडोर अन्तर्गत विष्णुमति करिडोरमा कालोपत्रको काम शुरु